गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डेको सरुवा
सरकारले गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डेको सरुवा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेको गृहमा सरुवा गरेको हो । पाण्डे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव छन् । बौद्धिक व्यक्तित्वले परिचित पाण्डे फागुन २०७६ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए ।
दार्चुला घटना : महाकालीमा बेपत्ता धामीलाई ड्रोनबाट खोजिने
सुरक्षा निकायले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी जारी राखेका छन् । नेपालतिर सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी तथा भारततर्फ भारतीय एसएसबीले नदी छेउछाउ खोजी जारी राखेका हुन् । यही साउन १५ गते तुइनबाट नदी तर्नेक्रममा उनी बेपत्ता भएका थिए । सुरक्षाकर्मीले दार...
एसईईको आन्तरिक मूल्यांकन परिपाटीले निरक्षर समेतले ‘हाइस्कुल’ पासको सर्टिफिकेट पाउने भएः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणी पौडेलले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रुप ल्याउने बताएका छन् । एसईईको नतिजापश्चात् आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष पौडेलले आन्तरिक मूल्यांकनबाट विद्यार्...
टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाउने सरकारको तयारी
सरकारले गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै विभिन्न मन्त्रालयहरुमा सचिव सरुवाको तयारीको क्रममा पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिन लागिएको हो । हाल पाण्डे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव छन् । बौद्धिक व्यक्तित्वले पर...
कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएकालाई साउन २५ देखि दोस्रो मात्रा
सरकारले कोरोनाविरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई साउन २५ गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिने भएको छ । जापान र भुटानबाट उक्त खोप आएपछि सरकारले दोस्रो मात्रा दिन लागेको हो । स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार एस्ट्राजेनका खोप कार्यक्रम साउन २५ र २६ दुुई दिनसम्म चल्नेछ । ६५ बर्षभन्द...
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शनिबारको बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी साउन ३१ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म परीक्षा हुन लागेको थियो । परिस्थिति अनुकूल भएपछि पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत बोर्डल...
जापानबाट आयो पाँच लाख मात्रा खोप, कसकसलाई लगाइन्छ ?
जापान सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको कोरोनाविरुद्धको करिब पाँच लाख मात्रा खोप आज काठमाडौं आइपुगेको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत पहिलो चरणमा एस्ट्राजेनेकाको पाँच लाख मात्रा खोप नेपाल आइपुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जानकारी दिए । ...
भुटानबाट झण्डै ३ लाख खोप नेपाल आइपुग्यो
भुटान सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको झन्डै ३ लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप आइपुगेको छ । आफ्ना लक्षित समूहलाई लगाइसकेपछि बाँकी भएको खोप भुटानले नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । भुटानको ड्रुक एयरलाइन्सको जहाज शुक्रबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा खोप लिएर आइपुगेको छ । भुटानले नेपाललाई अष्ट्र...
आयव्यय नबुझाउने ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज
निर्वाचन आयोगले विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको सूचना जारी गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले साउन २० गतेदेखि लागू हुने गरी ती दलहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेज हुने दलहरुमा राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्ट...
म्याद नाघेको किट पठाएपछि भक्तपुर अस्पतालद्वारा फिर्ता
कोभिड–१९ का शंकास्पद र आकस्मिक उपचार तथा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीका लागि कोरोना परीक्षण गर्ने एन्टिजेन किट जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरमा फिर्ता गरिएको छ । सरकारले निःशुल्क परीक्षणका लागि पठाएको उक्त किट स्वास्थ्य कार्यालयले डम्पिङ गरेर राखी म्याद सकिन लागेपछि मात्रै भक्तपुर अस्पताललाई पठा...
केपी ओली सहभागी कार्यक्रम बम राखेको हल्ला फैलाउने वाईसीएलका नेता पक्राउ
प्रदेश २ को स्वच्छता कार्यक्रममा अनियमितता, रकमअनुसार काम नभएको आरोप